အကယ်ဒမီ: ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၁၀)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၁၀)
သွယ်သွယ်အောင်သည် ထမီစကို အနည်းငယ်ပြင်ကာ ခြေကို ရှေ့သို့ဆန့်ထုတ်လိုက်သည်။ ဦးမျိုးမင်းသည် သူ့ပေါင်ကြားကို တစ်ခုခုလာထိသလို ဖြစ်သဖြင့် ငုံ့ကြည့်လိုက်ရာ သွယ်သွယ်အောင်၏ ခြေထောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ကျွန်မ ဒီအတန်းပိုင်ရာထူး ရမှ ဖြစ်မှာမို့လို့ပါဆရာ”
“ပေးတော့ ပေးချင်တယ် ဒါပေမယ့်...”
သွယ်သွယ်အောင် ထလာသည်။ ဦးမျိုးမင်းထိုင်ခုံကို ဆွဲလှည့်ကာ ရှေ့တည့်တည့် ကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက် ထိုင်ချသည်။ ဦးမျိုးမင်းက ဘာမှန်းမသိ ကြောင်နေသည်။ သွယ်သွယ်အောင်က ပုဆိုးစဆွဲချွတ်သည်။
ဦးမျိုးမင်းသည် လီးအစုပ်မခံဖူး။ စုပ်ပေးသောအခါမှာတော့လည်း လီးရည်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ လွတ်ထည့်မိသည်။ သွယ်သွယ်အောင်က ကြိုသိပြီးသားမို့ မြိုချပေးသည်။ အလကားရသည့် ကိစ္စကို မူးတင်းပဲတင်း ဘယ်သူမှ မငြင်းသည့် ထုံးစံအတိုင်း အလွန်လွယ်သော သွယ်သွယ်အောင်ကို ဦးမျိုးမင်းက အခွင့်သာတိုင်း ဆော်သည်။ အတန်းပိုင် ဖြစ်တော့လည်း ဆော်သည်။ သည်ကိစ္စကို သူငယ်ချင်းအား ဖွင့်ပြောမိကြောင်း သွယ်သွယ်အောင်အား ပြောတော့ သွယ်သွယ်အောင်က
“ဆရာကလည်း တုံးလိုက်တာ၊ ကျွန်မက အပေါက်စုံအောင် ပေးနေတာပဲ၊ သုံးယောက်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေ့ါ၊ တစ်ယောက်က ရှေ့ပေါက်၊ တစ်ယောက်က နောက်ပေါက်၊ ဟော နောက်တစ်ယောက်က ပါးစပ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်”
သူမစကားကို မျိုးမင်းက လက်ခံသည်။
“အိမ်က ဟာနဲ့ တခြားစီ”
သည်စကားကို ဒင်းတို့သုံးယောက်ကမှ ပြောတတ်သည် မဟုတ်။ သူမလည်း ပြောတတ်ပါကြောင်း သွယ်သွယ်အောင် မောင်းခတ်လိုက်ချင်သေးသည်။ သူမကမှ ထိုအခွင့်အရေးကို ပိုရခဲ့သေးကြောင်း ကြွားချင်ပါသေးသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျောင်းသားလေးနဲ့ တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်ကဟာကြီးကို ပေးရသည်မှာ ဆားမပါသည့်ဟင်းကို စားနေရသလိုပင်။ တခါခါ ယောင်ပြီးတော့ပင် “ကလေးရယ်” ဟု တမ်းတမိသေးသည်။ အိမ်ကဟာကြီးက သူ့ဘာသာသူ အားရအောင် တက်ဆောင့်ပြီး ပြီးသွားသောအခါ “ကလေးတော့ မရတော့ပါဘူးကွာ၊ သားကြောဖြတ်ထားတာပဲ” ဟုပြောပြီး အိပ်ပျော်သွားသည်။ သူမ မျက်စောင်းထိုးကာ လိုးပြီး နားမလည်သည့်လူ။ ကိုယ့်ထမီကို ပြန်ဆွဲချကာ အိပ်လိုက်သည်။ သည်စကားများကို သူမပေးမှ ရဖူးသော ဦးမျိုးမင်းတို့အုပ်စုက ပြောသည်တဲ့။ ပြောမှာပေါ့လေ။ သူမ ကျောင်းသားလေး ထံမှ ရလိုက်သော ပညာက နည်းမှ မနည်းဘဲကိုး။ ဒီပညာကို သွယ်သွယ်အောင်က လွယ်လွယ်နဲ့ တော့ ပြန်မပေး။ မြန်မာတို့ မည်သည် ပညာကို လျိုတတ်သည် မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ...
မျိုးမင်းသည် ကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက်က ထိုင်နေသည်။ သွယ်သွယ်အောင်က မျိုးမင်းခေါင်းကို ကိုင်ကာ သူမပေါင်ကြားထဲ သွင်းထားပြီး ပေါင်တစ်ဖက်ကို ပခုံးပေါ် တင်ထားသည်။ မျိုးမင်းက သူမစောက်ဖုတ်ကို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်သလို စုပ်ပေးနေချိန် ဇော်ထက်နှင့် လှကျော် ရောက်လာသည်။
“အား အချစ်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ၊ မောင် မောင့်သူငယ်ချင်းတွေ ထင်တယ်”
“ဝူး အူး ဝူး”
မျိုးမင်းက တစ်ဖက်လှည့်ကြည့်ချင်သော်လည်း လှည့်မကြည့်အားဘဲ ဖြေသည်။ ဇော်ထက်နှင့်လှကျော်မှာ မမြင်ဖူးသည့် မြင်ကွင်း မထင်မှတ်သည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ရွံသွားသည်။
“ငါတို့ ပြန်တော့မယ် ဟေ့ကောင်”
သွယ်သွယ်အောင်က အမြန်လေးပင် သူတို့ပေါင်ကြားကို ဆွဲဖမ်းလိုက်သည်။
မျိုးမင်းကလည်း ထပြီး သူမနောက်မှနေ၍ လိုးသည်။
သွယ်သွယ်အောင် ရှေ့သို့ ထိုးယိုင်သည်။ မျိုးမင်းက နောက်မှ ဆက်တိုက်လိုးသည်။
“ခဏ နေဦးကွာ ဟေ့ကောင်တွေ”
မျိုးမင်းက သွယ်သွယ်အောင် ခါးကိုဖက်ကာ ကုန်းပြီးဆော်သည်။
“ခဏပါကွာ၊ သူ့နောက်ပေါက်ကို ဆော်လိုက်ဦးမယ်”
မျိုးမင်းက ပြောပြောဆိုဆို သူမဖင်ကို လိုးသည်။
သွယ်သွယ်အောင်က နာ၍ အော်သော်လည်း ကိုင်ထားသော ဇော်ထက်နှင့် လှကျော်ပေါင်ကြားကို မလွတ်။ သူတို့က မလွတ်ပေးသဖြင့် မသွားသလိုလိုနဲ့ လက်တွေ့ဖူးကားဆန်ဆန် လိုးနေသည်ကိုလည်း ကြည့်ချင်ကာ မတိုင်ပင်ရဘဲ ရပ်နေကြသည်။ မျိုးမင်းက ဖင်ကို ကြုံးလိုးနေသည်။ သူငယ်ချင်းရှေ့မို့ထင်သည်။ လိုးချက်က ပြင်းသည်။
“အ.. အ.. အွတ် အု အ အ...”
သွယ်သွယ်အောင်ပင် တော်တော် နာလာသဖြင့် ညည်းမိသည်။ ဇော်ထက်က စကာ သူမကျောကို ပွတ်သည်။ သူမက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။ မျိုးမင်းက ဖင်ကို အားပါးတရ လိုးနေသည်။ မျိုးမင်းက ခပ်သွက်သွက်လိုးသဖြင့် ပြီးလုနီးပါး ဖြစ်သွားတော့ သူမကို ထိုင်ခိုင်းကာ ပါးစပ်ကို လိုးသည်။ သူမငြိမ်နေပေးသည်။ နောက်မျိုးမင်းက ကွင်းထုတော့ သွယ်သွယ်အောင် ပါးစပ်ကို ဟထားပေးလိုက်သည်။ လီးရည်များ တဗျစ်ဗျစ်ဝင်လာသည်။ သူမက လီးရည်များကို ငုံထားသည်။ နောက် လက်ဝါးထဲ ပြန်ထွေးထုတ်ကာ အကုန် ပြန်မျိုချလိုက်သည်။ ဇော်ထက်နှင့် လှကျော်က စိတ်ဝင်စားနေသည်။ သူတို့က သွယ်သွယ်အောင်ကို ဖိုက်လို့ရသည်ဟု မျိုးမင်းဆီမှ ကြားထားဖူးသော်လည်း ဤနည်းဤဖုံ ဖိုက်လို့ရလိမ့်မည်ဟု ထင်မထား။ ကိုယ့်ဟာကို ငုံပေးမည့်အပြင် လီးရည်လည်း မြိုချပေးမည့် ဆော်မျိုးကို ဖာသည်မများကပင် သိပ်လုပ်ပေးလေ့ မရှိ။ ခုလို တင်ကောင်းကောင်း ရင်ကောင်းကောင်းနှင့် လှတီးလှတ ဣနြေ္ဒတခွဲသားနဲ့ နေကာ ကျက်သရေရှိလှသည့် ရုပ်ရည်ဖြင့် နာမည်ကြီးလှသော ဆရာမ၏ အပြုအစုကို သူတို့လည်း ခမ်းနားစွာ ပါဝင်ချင်လာသည်။ စောက်ဖုတ်နှင့် ဖင်ကို တရှုးဖြင့် သုတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုလည်း သုတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးသည်။
ဇော်ထက်က သူမတင်ကို လာပွတ်သည်။
“ကျွန်တော့်ကိုလည်း မျိုးမင်းလို သဘောထားပေးပါနော်”
သွယ်သွယ်အောင် ဘာမှ မပြောဘဲ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းနီကိုသာ ညီအောင် မှန်ကြည့်ဆွဲနေသည်။ ဇော်ထက်က သူမခါးကို ဖက်သည်။
သွယ်သွယ်အောင် ဘာမှ မပြောပါ။ ဇော်ထက်က ပခုံးများကို နမ်းသည်။ နှုတ်ခမ်းအထိအတွေ့အရ ဇော်ထက် တော်တော်ဆာနေပြီမှန်း သွယ်သွယ်အောင် သိပါသည်။ သို့သော် သိပ်လွယ်လို့ မဖြစ်။ ကျောများကို နမ်းဆင်းသည်။ လှကျော်ကလည်း ဘာသားနဲ့ ထုထားတာမို့လဲ။ သူမရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ချသည်။ သူမချက်လျက်လေသည်။
“ဘာပဲ လုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရ ကျွန်တော် မနေတတ်တော့ဘူး”
သူမ စိတ်ထဲ ကြိတ်ပြုံးရလေပြီ။ သို့သော် သူမ မသိချင်ယောင်ဆောင်မြဲ။ ဇော်ထက်က ခါးမှအောက်သို့လျှောကာ တင်ကို နမ်းစုပ်လေသည်။ လှကျော်က စောက်ဖုတ်ကို လျက်ပေးချင်ပုံရသော်လည်း သိက္ခာထိန်းက စောက်အုံတစ်ဝိုက်နှင့် ဆီးခုံကို စုပ်သည်။ သူမလည်း ရင်ခုန်လာသည်။
“ရှင်တို့က ကျွန်မကို တကယ်စိတ်ဝင်စားလို့လား”
သူမက အနည်းငယ်ရှောင်ကာ ဒင်းတို့မေးစေ့ကိုင်ပြီး မေးလိုက်သည်။ အံမာ နွားကြီးတွေက အပြိုင်အဆိုင် ခေါင်းညိတ်ကြသည်။ အလကားလိုးရမည့် ကိစ္စကို သိပ်ငြင်းချင်နေပုံရသည်။ သူမကလည်း ဝါရင့် သမ္ဘာရင့်ပီပီ သိက္ခာကို ထိန်းလိုက်သည်။
“ကျွန်မက ပြီးနေပြီ၊ ကျွန်မစိတ်ပြန်လာအောင် ရှင်တို့ ပြန်လုပ်နိုင်ရင်တော့ ရှင်တို့သဘောပေါ့”
“ကျွန်မကတော့ အဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းလျက်ပေးနိုင်ရင် စိတ်လာတတ်တာပဲ”
သွယ်သွယ်အောင် နည်းနည်းကားပေးလိုက်တော့ သကောင့်သားနှစ်ယောက်က တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်သည်။
“ကောင်းကောင်း လျက်ပေးနိုင်တဲ့သူကို ကျွန်မ ပြန်စုပ်ပေးမယ်”
အမလေး လီးစုပ်သိပ်မခံချင်ကြ။ ခေါင်းချင်းတောင် တိုက်မိသေးသတဲ့။ တကယ်တမ်းကြပြန်တော့ မလျက်ရဲကြပြန်။
ဇော်ထက်က သူမပေါင်ကို ကိုင်ထားသည်။
“ရှင်တို့ အကုန်ချွတ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လေး အိပ်နေကြစမ်းပါ”
သူမက ခြေမဖြင့် ဇော်ထက်လီးကို ကစားသည်။ နောက် လှကျော်လီးကို ကစားသည်။ လီးတွေကတော့ စံချိန်မီကြသည်။ ငယ်ကအချစ် အနှစ်တစ်ရာ မမေ့သာဟု ဆိုထားကြသည့်စကားကြောင့်လား မသိ။ ကျောင်းသားလေး လီးကိုတော့ မမီဟု သူမထင်သည်။ ထင်တာ မဟုတ်။ လုံးဝကို မမီကြပါ။ သို့သော် ဒါကလည်း ဖြေသာသည်။ ဇော်ထက်ကို ခွရပ်ကာ ရှေ့သို့တိုးသည်။ အသာလေး ကားပြီးထိုင်ချသည်။ စောက်ခွက်ကို ဇော်ထက် မျက်နှာရှေ့ အပ်ထားသည်။ ဇော်ထက် လျှာထုတ်သည်။ သူမက လျှာပေါ် စောက်ပတ်ဖြင့် ပွတ်သည်။ ရွံသလိုလို ဇော်ထက်၏ အပြုအမူ အထိအတွေ့ကြောင့် အရသာက တမျိုးရသည်။ ဇော်ထက်က မထူးဆိုသည့် သဘောကို ပိုက်လိုက်သလား မသိ။ သူမတင်နှစ်လုံးကို ပင့်ကိုင်ကာ အဖုတ်ကို စုပ်လေသည်။ တပြွတ်ပြွတ်မြည်နေသည်။ စောက်စေ့ကို ဆွဲစုပ်သဖြင့် စောက်ကြောမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ခန္ဓာအပြည့်ဆီသို့ ဆိမ့်တက်သွားသည်။ သူမက လှကျော်ကို ပြောင်းခွသည်။ လှကျော်လည်း ဇော်ထက်ကို အားကျမခံ စောက်စေ့ကို စုပ်သည်။
ဇော်ထက်နှင့် လှကျော် မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ သူမက ကြားထဲ ဒူးထောက်ထိုင်ချသည်။ တန်းနေသော လီးနှစ်ချောင်းကို သူမတပြိုင်နက်ကိုင်ကာ ကွင်းထုသည်။ ဇော်ထက်နှင့် လှကျော်မှာ ဖီးလ်တက်နေသည်။ ဇော်ထက်လီးကို အရင်စုပ်ပေးလိုက်သည်။ စတိသဘောစုပ်ပြီး လှကျော်လီးကို စုပ်သည်။ ဇော်ထက်လီးက မည်းရှည်ရှည်ကြီး ဖြစ်ပြီးပျော့သည်။ လှကျော်လီးက တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြစ်ပြီး မာသည်။ ဇော်ထက်လီးက ထိပ်ခေါင်းပိုကြီးသည်။ လှကျော်လီးက တပြေးညီကြီးသည်။ ဇော်ထက်ကို အာရုံလာသဖြင့် ဇော်ထက်လီးကို ဆွဲကာ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ကားထားပေးလိုက်သည်။ ဇော်ထက်က ဝမ်းသာအားရ တက်လိုးသဖြင့် လီးမှာ တစ်ချက်တည်း မြုပ်ဝင်သွားသည်။ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ဆောင့်လိုးသည်။ လက်ညိုးဖြင့် ထွက်ခိုင်းပြီး လှကျော်ကို ဝင်စေသည်။ လှကျော်လည်း ဇွတ်သွင်းသည်။ သွယ်သွယ်အောင်သည် လီးအမျိုးမျိုး၏ အရသာကို ရလိုက်သဖြင့် ပီတိဖြစ်သည်။ ဖီးလ်လည်း ပိုတက်လာသည်။ တစ်ယောက်စီ တစ်ယောက်စီ တက်ခိုင်းသည်။ တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ နှစ်ကြိမ်လောက်သာ ချသည်။ သုံးကြိမ်ရောက်လာတော့ ဇော်ထက်က အားကုန်လိုးသည်။ ကုတင်တောင် ကျိုးကျတော့မည့် အတိုင်း။ သွယ်သွယ်အောင်လည်း အားရသဖြင့် ခြေထောက်များဖြင့် ကျောပြင်ကို လှမ်းဖက်ကာ ကော့ပေးလိုက်သည်။ ဇော်ထက်ခန္ဓာကိုယ်က ညိုညိုတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ရှိလှသဖြင့် ဖိအားကောင်းသည်။
သူမက တပြွတ်ပြွတ်လိုးနေသည့်ကြားမှ လှမ်းသတိပေးလိုက်သည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် လီးကို ရုတ်တရက်ဆွဲထုတ်ကာ ဗိုက်ပေါ် လွတ်ချသည်။ လှကျော်က သွယ်သွယ်အောင် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထောင်ကားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကုတင်အောက်မှ လိုးသည်။ မှောက်မလိုး။ တော်ကြာ သွယ်သွယ်အောင် ဗိုက်သားပေါ် ပေပွနေသော လီးရည်နဲ့ သူ့ကိုယ်ထိမိမှာစိုးသည်။ လီးရည်များက နည်းနည်းနှောနှော မဟုတ်။ သူမခြေကို ထောင်ကားပြီး ဇွတ်လိုးနေသော လှကျော်လိုးချက်များကလည်း ပြင်းထန်သည်။ တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ မြည်နေသည်။ ပြီးတော့ လှကျော်က စောက်ဖုတ်ပေါ် လီးရည်ကို လွတ်ချသည်။ မျိုးမင်းယူလာပေးသော တစ်ရှုးဖြင့် လီးရည်များကို သုတ်လိုက်သည်။
အမျိုးကောင်းသားများသည် သွယ်သွယ်အောင်အား တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖက်ကြသည်။ ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ ပါးကိုနမ်းသည်။ နို့ကိုကိုင်သည်။ အဖုတ်နှိုက်သည်။ အိုးကို ပုတ်ကစားသည်။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပြောင်းရင်း ဇော်ထက်ရင်ခွင်ထဲရောက်တော့ မျိုးမင်းက လှမ်းဆွဲကာ လီးကို စုပ်ခိုင်းသည်။ သွယ်သွယ်အောင် မျိုးမင်းလီးစုပ်နေခိုက် ဇော်ထက်က သူမအိုးကို ဆုပ်ကိုင်ကစားရင်း ဖင်ကြားထဲ စတော်ဘယ်ရီသီးကို ထည့်ကာ ညစ်သည်။ စတော်ဘယ်ရီသီး ကွဲသွားတော့ လှကျော်က လျက်ပေးသည်။ စနေ တနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း ချိန်းကာ စိတ်ကြိုက်လိုးခဲ့ဖူးသော အပတ်ပေါင်း ရှစ်ပတ်ရှိခဲ့ပြီးနောက် သူတို့အားလုံး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် ချစ်ကြသည်။ သွယ်သွယ်အောင်ကပဲ ဏှာကြီးလို့လား ယောကျာ်းသုံးယောက်ကပဲ အားနည်းလို့လားမသိ။ သွယ်သွယ်အောင်မှာ ပင်ပန်းသွားသည် မရှိဘဲ သူတို့ကသာ မလုပ်နိုင်တော့သာ ရှိသည်။ အလိုးကြမ်းသလို အပေးလည်းကြမ်းသည်။ သူမကို စိတ်ကြိုက်လိုးပြီးနောက် “အိမ်က ဟာနဲ့ တခြားစီဘဲကွာ” ဟု လီးရည်ကို ပါးစပ်ထဲ သွင်းပြီး ပြောကြသည်။
ခံနည်းပေါင်းစုံဖြင့် သူမခံပေးပြီးနောက် သူမတစ်ယောက်တည်းကို လိုးရတာ အားမရဟု ဆိုလာသဖြင့် သွယ်သွယ်အောင်က စိမ်းစိမ်းနွယ်ကို မြူဆွယ်လိုက်ရသည်။ ကလေးအမေချင်းမို့ သိပ်မမြူဆွယ်လိုက်ရ။ ခက်သည်က စိမ်းစိမ်းနွယ်က ဖင်ကို တော်တော်နဲ့ အလိုးမခံ။ လီးကို စုပ်တာတောင်မှ သူမစောက်ပတ်ကို လျက်ပေးသဖြင့် အားနာကို စုပ်ပေးသည်။ နို့ကြားကိုလည်း တော်တောကြာမှ လီးနဲ့ အထိုးခံသည်။ ဖင်ကိုတောင် သူမခံပြပါများမှ နာရင် မပေးဘူးနော်ဆိုကာ အစမ်းအလိုးခံသည်။ လိုးသူက ကြည့်ဦး။ လီးအကြီးဆုံး မျိုးမင်း။ မျိုးမင်းကလည်း အခွင့်အရေး အလွတ်မခံ။ မရရအောင် လိုးသည်။ ရုန်းမရအောင် ချုပ်လိုးသည်။ ရသွားတော့ ငနဲနှစ်ကောင်က စိမ်းစိမ်းနွယ်ဖင်ကို တမျှော်မျှော်ဖြစ်နေကြသည်။ စိမ်းစိမ်းနွယ်ကလည်း နာသည်ဟုဆိုကာ မပေးပြန်။ အဖုတ်လျက်ပေးရင်း ဖင်ကိုလျက်ပေးကာ “ဖင်ခံပေးမယ် မဟုတ်လားဟင်” ဟုစကားစသည်။
“အဲလောက် နာမယ်မှန်း မသိလို့နော်”
“ဒါဆို ပါးစပ်ကို လိုးမယ်”
“လိုးပေါ့ ပါးစပ်ကို ရှင်တို့ ခဏခဏ လိုးနေတာပဲ”
“နောက်ပိုင်းတော့ ဖင်ခံချင်တယ် လာမပြောနဲ့နော်”
လေးငါးချီ ပါးစပ်ကို လိုးပြီးနောက် စိမ်းစိမ်းနွယ် မနေနိုင်တော့ဘဲ ဖင်ခံပေးသည်။ ထိုနေ့ သူတို့ ဖင်ကိုချည်း လိုးပစ်သည်။ စိမ်းစိမ်းနွယ်လည်း အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ဖင်ချည်းတောက်လျှောက်လိုးခိုင်းသည်။ ဖင်ပဲပေးသည်။ ဖင်ပဲ လျှက်ခိုင်းသည်။ လေးငါးချီကြာပြန်တော့ “အဖုတ်ကို မပေးတော့ဘူးလားဟင်” ဟု မေးပြန်သည်။ သူမလည်း ဆာပြီ ဖြစ်သဖြင့် “ရှင်တို့က အမြဲတမ်း တမျိုးလိုနေတာပဲနော်” ဟု မာယာများသည်။
“မင်းကို သုံးယောက်တွဲ ဖိုက်ကြည့်ချင်လို့”
“ဖင်တောင်းလိုးတုန်းကလည်း အဲလိုပြောတာပဲ၊ တစ်ခါတည်းဆိုပြီး ဟွန်း”
အခြေအနေပေးသဖြင့် သုံးယောက်သား အပေါက်စုံအောင် ဝိုင်းပလေးကြသည်။ ပါးစပ်၊ စောက်ဖုတ်နှင့် ဖင်သုံးပေါက်လုံးကို မလွတ်တမ်း လီးကြီးများဖြင့် သိပ်ထည့်ကာ ပလေးပြီးနောက် လီးရည်ကို ပါးစပ်ထဲ ဝိုင်းသွင်းသည်။ အားလုံး အဆင်ပြေစွာ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်နှင့် ယောက်ျားသုံးယောက်တို့ စိတ်တိုင်းကျ ပလေးနေကြစဉ် မယ်ရွေးပွဲကြီး ရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုပွဲတွင် ပထမဆုလည်းပေး လူလည်းယူလုပ်ကြလိုက်ရာ နုနုမေဆိုသည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူတို့၏ ပစ်ကွင်းထဲ အလူးအလဲခံလိုက်ရသည်။
နုနုမေသည် ထိုစဉ်ကအသက်မှာ ၁၆ နှစ်စွန်းစွန်းသာ ရှိသည်။ သွယ်သွယ်အောင်နှင့် စိမ်းစိမ်းနွယ်ကတော့ တစ်ယောက်မှာ ၃၂ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်မှာ ၂၈ ဖြစ်သည်။ မိန်းမသားချင်း မညှာတာသည့်အပြင် သူတို့ကပါ ဝင်ကဲသည်။ သို့ဖြင့် နုနုမေ၏ အပျိုစင်နိဂုံးမှာ စောက်ဖုတ်ရော ဖင်ပါ ပွင့်ခဲ့ရသည်။ ရွံသော်လည်း လီးရည်ကို မျိုချခဲ့ရသည်။ နှစ်ရက်သုံးရက်မျှ သူမ အစားပျက်ခဲ့ရသည်။ မမနု၏ဇာတ်လမ်းကို မမနုက ထိုနေရာတွင်သာ အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ အဆုံးမသတ်လို့လည်း မရ။ ထူးစိန်၊ သော်ကနှင့် သိန်းဦးတို့က ဆော်ချင်းပြောင်းကာ ဇာတ်လမ်းက စနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ထူးစိန်က ညိုညိုမာ၊ မျိုးရတီနွယ်နှင့် ဆုရီရီဖြိုးခေါ်လိုက်ပြီး မမနုကို သိန်းဦးရော သော်ကပါ တွဲယူသည်။ ကျန်သည့် ဂျူလှိုင်ခင်၊ ဝါဝါကျော်၊ ရွှေရည်နှင့် မျိုးရတီနွယ်တို့မှာလည်း မမနုနှင့် ကပ်နေကြသည်။ သနားသဖြင့် နုနုမေကို နှစ်ပေါက်လုံး ဆွဲပေးပြီး ကျန်ကောင်မလေးများနှင့် စိတ်တိုင်းကျ တစ်ချီဆွဲပြီးနောက် တစ်ယောက်ယောက်၏ ဇာတ်လမ်းကို နားဆင်လိုကြောင်း ပြောတော့ ဝါဝါကျော်နှင့် ညိုညိုမာက သူမတို့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြသည်။ သူမတို့က နှစ်ယောက်သား ပြိုင်ကာ ပန်းဦးအခြွေခံရသည်။
Posted by အကယ်ဒမီ at 1:39 PM
Labels: MM SEXY
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၁၃)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၁၂)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၁၁)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၉)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၈)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၇)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၆)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၅)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၄)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၃)
ရှေ့နေမလေးသီရိနှင့် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (၂)
MM SEXY (15)
I Want To fuck all girl and lady
Burmese Actress, Burmese Model girl, Sexy, Cute, Hot, Pretty Photos Collection!
Copyright 2009 အကယ်ဒမီ All rights reserved. Template Source: Free Blogger Templates